Ikayiti eyayibizwa ukuba ibuBuhlobo – Isahluko 6 | FunDza
Ikayiti eyayibizwa ukuba ibuBuhlobo - Isahluko 6
Indlela eya empilweni kaDavid yaba nde kwaye yayibuhlungu. Unyaka wonke onesiqingatha inkqubela eya empilweni yayicotha, iqale ekungakwazini kwakuhamba oko ukuya ekuqhwaleleni, ukuya ekutsala-tsaleni yonke into ekuthiwa ngumsipha ukuya kutsalwa kwanto ekuthiwa sisihlunu ngoncedo lwe-physiotherapist.
Ndakholiseka kakhulu kuba nomhlobo wam uMpho naye waphila. Ucinge ke ukuba, le ngozi yenzeka emva kokuba ndandimmemele ukuba eze eklabhini nam. Ubuhlobo bam noSibu bona kwelinye icala bakhula nangaphezulu. Mhlawumbi kwakusenziwa nayinto yokuba ndandiziva ndimtyala, yayikwakukubuyelana kwethu bobuhlobo nobunakwethu esasinabo, ukususela ngokuya kwakudlalwa phakathi kwezindlu.
Ngoku ngeli ilixa esikulo sisobabini, ndibalisa eli bali ndihleli ecaleni komhlobo wam wenene. Ndisemtshatweni wakhe, ezimanya noyena mntu wakhe amthanda kakhulu ebomini. Nawaphi na amawonga endiwafumana aphezulu kumdlalo wam ndisi-scrum half se-Blue Bulls, bendisoloko ndidlulisela loo mawonga kusajini ongumhlobo wam wenene, iqhawe elingaziwayo.
“Siza kudlulisela i-mic kuMnumzana uDavid Bokang Maatla, umhlobo wakudala ukususela ebuntwaneni bukaSibusiso. Akakho umhlobo omazi uSibu njengoDavid. Khanimqhwabeleni izandla kaloku ngoku esonyuka esiza eqongeni.” Umalume uMathabatha undazisa kakuhle nakamnandi ngokungathi ndiyimvan’ engenasiphaku ngokungathi ndiyile glasi ingagcwelanga yewayini kanokutso ye-sauvignon blanc asele eyingcamle, uyasonwabisa nangokusilandisela ukuba wayenza kanjani na xa wayetshintsha iilweyile zikaSibu.
“Eee, enkosi kakhulu, malume, maz’ enethole. Ndiyazibulisela kuye wonke umntu. Igama lam nguDavid Maatla, njengoko sele endendlalele umalume obekekileyo xa ebendazisa. Andizi kumshawa ndimphehlelela xesha lide ngemibongo umhlobo wam, uSibu, andizi kunibalisela mabali ezolo, nawonyaka ophelileyo. Lo ngumntu obaluleke kakhulu kum. Sadibana sisekwisikolo samabanga aphantsi, sidibana epakini xa ndandicinga ukuba ndingu-Superman wakho mhlobo wam. Kodwa ke lona ixesha lahamba lavela laqaqambisa ngakumbi elakho igama ngandlela zonke. Ke wena uvele wanobunganga obungaphaya, uliQhawe lam mf’ethu. Uxolo wethu, Buhle, ndivakala ngathi ndingoyena osisithandwa sakhe ngoku, kodwa khawundixolele okwangoku ndiyakucela mntasekhaya …
“Ndikhumbula xa wayesanxiba iiglasi ezinkulu, ndandimncitha kanobom ke ngazo. Hayi ke andizisoli ngaloo nto. Ukuba nanimbonile nani, yhuu – le ndawo iyiglasi yayibonosa amehlo akhe njengoko ayenjalo, ayengathi aza kugqabhuka aze kuwela kuwe nqo!”
Kwaba yintswahla wonke umntu onwabile, kwakucacile ukuba bafun’ ukuva nangaphezulu ngamabali obuhlobo bethu.
“Into ebendizama ukuyitsho ke yile, indoda ngoku seyikhule de yaba yisajini yezonyango. Ndithi mna isajini wonke! Niyazi ukuba bangaphi na abantu abafikelela kwelo nqanaba ebomini? Ndingaba ndiyaziwa kakhulu ngendlela endandixhaphaza ngayo ebaleni xa ndandidlala ibhola yombhoxo. Kodwa ndiyazi kakuhle ukuba xa ndiphelelwa kulo mdlalo mandiqhakamshelane ngokukhawuleza nabani na, nawe kufuneka kube njalo kuwe. Kodwa kufuneka ndimhlawule lowo ndimqhakamsheleyo, yimali into ethethayo kaloku. Akukho nto eza mahala.” Ndinqumamile ngeli lixa iindwendwe nabazimasi theko begigitheka yintsini kwakhona.
“Xa ndithetha ezobugqala ke ngoku. Sibu, asoze ndikulibale ebomini bam. Into owandenzela yona ngexesha endandilwela ubomi bam kwanekamva lomsebenzi wam ndisesibhedlele ndilele ngandletyana nye. Intobeko onayo iyamangalisa, intembeko onayo ingaphaya kokuqonda. Besingaba ngathi besikhuphisana ngamaxesha athile, ide ibe ngathi siyinyoka nesele, kanti yonke loo nto ibisenza ukuba sizimisele nangakumbi kwizinto esigqame ngazo, siziphumelele siye kutsho apho nathi besingacingelanga. Uncede Buhle, umphathe kakuhle nangenyameko, umnakwethu lo.”
Ndibuyele ngokukhawuleza esihlalweni sam, sendilandelwa kokunjani kona ukuqhwatyelwa, nanko ke noMalume uMathabatha sele ebuyela eqongeni ebuhamba kanzinyana. USibu yena wandamkela ngokundanga.
“Ade amavili aqhawuke mhlobo wam, ndakusoloko ndikuxhasa,” utshilo uSibu, endiqhoboshela kufutshane kuye. Sabe ke sobabini sisiva ubushushu phantsi kwekayiti eyonyukela phezulu yobuhlobo bethu obukhula imini nemini. Imini yona isende kwaye kuza kuba mnandi, senza iminqweno emihle (toast) kwikamva eliqaqambileyo.
Khawukhe usazise: Zithini iingcinga zakho ngeli bali? Unabo obunye ubuhlobo obuye bakumangalisa obuye bavavanywa kwanobom balingwa njengobu bukaSibu noDavid kodwa baluphumelela uvavanyo?
Ewe ,xanikwaz ukuxolelana,okanye omnye wenu xa ekwaz ukuzithoba buye buqhubeke ubuhlobo Elibali liyasi fundisa ukuba abahlobo bakudibana nabantu Abanodlobongela Bayatshintya bafane nengonyama apha kuthi